अमेरिकाबिनाको स्वतन्त्र व्यापार - Karobar National Economic Daily
अमेरिकाबिनाको स्वतन्त्र व्यापार
query_builderMarch 31, 2017 8:51 AM supervisor_accountआन्द्रेस भेलास्को visibility897
विश्व अर्थतन्त्रबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले अघि सारेको ‘पहिले अमेरिका’ नीतिलाई ल्याटिन अमेरिकाले कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्ला ? यहाँ एउटा सम्भावित उत्तर छ ः संयुक्त राज्य अमेरिकाबिना अमेरिकाको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाउनुपर्छ ।
वास्तवमा, यो विचार नितान्त नयाँ भने होइन । ल्याटिन अमेरिकाका रिपब्लिकका संस्थापक पिताहरूले दुई शताब्दीअघि यसबारे कुरा गरेका थिए । तर, यो कहिल्यै यथार्थ बनेन । १९६० तिर ल्याटिन अमेरिकीहरूको एकीकरणका विषयमा धेरै कुराकानी भए । सभा–सम्मेलनहरू भएका थिए र सहमतिपत्रहरूमा हस्ताक्षर भएका पनि थिए । तर, स्वतन्त्र व्यापारका लागि नाम मात्रका काम भए । यस क्षेत्रका धेरै देशको व्यापारका ठूला साझेदारहरू आफ्ना नजिकका छिमेकीभन्दा युरोप अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका नै रहे ।
१९९० को सुरुवातमा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज एचडब्लू बुसले अलास्कादेखि टिएरा डेल फ्युगोसम्मका क्षेत्रलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसको लगत्तै अमेरिकाले क्यानडा, मेक्सिको, चिली, कोलम्बिया, पेरु र सेन्ट्रल अमेरिकासँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नै गरेको थियो । तर, उत्तर दक्षिणको यो महत्वाकांक्षी र महत्वपूर्ण सहमतिले ठोस आकार भने लिएन ।
राम्रो खबर के छ भने क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापारका धेरै अवरोधक तत्वहरू भने त्यसयता हराएका छन् । त्यसैले सिमोन बोलिभरको दुई शताब्दी पुरानो विचारलाई समातेर अघि बढ्ने यो सही समय हो । किन क्षेत्रगत व्यापार सम्झौता खेर गयो भन्नेमा एउटा कारण छ, त्यो हो— सम्झौताको आयोजक अमेरिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ब्राजिल सहभागी हुन अनिच्छुक हुनु । तर, यदि ट्रम्प संरक्षणवादी प्रतिबद्धतामा टाँसिइरहन्छन् भने उही व्यापार सहमतिभित्र अमेरिका–ब्राजिलबीच विरोधलाई लिएर हामीले अब चिन्तित भइरहनु आवश्यक छैन ।
विगतमा, ठूला कृषि निर्यात गर्ने अर्जेन्टिना र ब्राजिलजस्ता राष्ट्रहरूका लागि अमेरिकाले फर्महरूलाई दिने अनुदान नै सम्झौता तोड्नुका कारण थिए । अमेरिका यो परिदृश्यबाट बाहिरिएसँगै यो पनि अब विवादको मुद्दा रहेन ।
१९९० को समय बितेपछि ल्याटिन अमेरिकी धेरै देशहरूमा वामपन्थी लोकप्रियतावादीहरू सत्तामा आए । अर्जेन्टिना, बोलिभिया, इक्वेडर, निकारागुआ र भेनेजुएलाको सरकारका लागिसमेत स्वतन्त्र व्यापार भनेको ‘नवउदारवाद’ फोहोरी शब्द थियो । यी देशका नेताहरूका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गर्नु सोचाइभन्दा बाहिरको विषय थियो ।
वर्तमानमा, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा लोकप्रियताको ब्रान्ड बिस्तारै सेलाउँदै छ । अर्जेन्टिनामा पेरेनको विचार बोक्नेहरूले राष्ट्रपतित्व गुमाए । ब्राजिलकी राष्ट्रपति डिल्मा राउस्सेफले महाभियोग झेलिन् । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुराको तानाशाही शासन रसातलमा भासिँदो छ ।
इक्वेडरले लोकप्रियतावादसँगको चोचोमोचो चाँडै नै समाप्त गर्दै छ । राफेल कोर्रियाले छानेको आफ्नो उत्तराधिकारीले देशको पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा उनले सोचेजस्ता राम्रो गर्न सकेनन् । त्यसैले यी तीन प्रमुख अवरोधहरू हटेसँगै स्वतन्त्र व्यापार सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नबाट केले रोकिरहेको छ त ?
यसमा राजनीतिक शून्यता र स्पष्ट नेतृत्वको अभावबाहेक अरू केही पनि अवरोध देखिन्न । तर, व्यापार एकीकरणको मसाल लिएर रियो ग्रान्डेदेखि काबो डी होर्नोससम्म पुग्ने क्षेत्रीय नेताहरूको अभाव भने छैन । अमेरिकासँग सावधान रहँदारहँदै पनि पूर्व ब्राजिली राष्ट्रपति र उनीहरू भन्सार र गैरभन्सार अवरोधका कारण आफ्नो आन्तरिक व्यापार बलियो हुन सक्दैन कि भन्नेमा त्रस्त छन् ।
साओ पाउलोको औद्योगिक केन्द्रमा संरक्षणवादी भावना सधैं बलियो रूपमा रहिआएको छ र अहिले पनि यो कायमै छ । तर, ब्राजिल दशक लामो गम्भीर मन्दीबाट भर्खर मात्रै माथि उठ्न थालेको छ । ब्राजिलीयन व्यवसायहरू बेचैनीका साथ नयाँ ग्राहक खोजिरहेका छन् । चीनको आर्थिक विकास सुस्त हुँदै छ । युरोप आफ्नै समस्यामा फसेको छ र अमेरिका आफूलाई पर्खालभित्र राख्दै छ । त्यसैले यस क्षेत्रको बढ्दो बजारमा नयाँ आकर्षण छ ।
मेक्सिकोमा पनि समान खालको घटना भएको छ । यसका नेताहरूले सधैं क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापारका बारेमा कुरा गर्ने गरेका छन्, तर अमेरिकी बजार जहाँ उनीहरूको ८० प्रतिशत निर्यात हुन्छ, त्यसमा उनीहरूको वास्तविक स्वार्थ के छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्ने कुनै पनि गुप्तचर छैनन् ।
अहिले ट्रम्पले मेक्सिकोका आप्रवासीहरूलाई बलात्कारी भनेका छन् र मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने (साथै मेक्सिकोबाट हुने आयातमा भन्सार लगाउनेसमेत) घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाले व्यापार आत्मीयता गुमाएको छ ।
यस्तोमा कसले नम्रताका साथ आग्रह गर्न सक्छ र ? त्यसैले के अचम्म मान्नु पर्दैन भने मेक्सिकोका राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीहरूले नयाँ उत्साहका साथ दक्षिणतर्फ हेर्न थालेका छन् ।
अजेन्टिनासँग पनि क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापारलाई समर्थन गर्नुपर्ने कारण छ । राष्ट्रपति माउरिसियो माक्रीको पुरानो प्रशासन स्वाभाविक रूपले आर्थिक उदारवादतर्फ झुकेको छ । अहिले अर्जेन्टिना माउरिसिओले गरेको ब्राजिल, पाराग्वे र उरुग्वेसँगको क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको बाह्य भन्सारशुल्कको चपेटामा परेको छ ।
विद्यमान सम्झौता नतोडीकन वृहद् खुलापन प्राप्त गर्ने कम जोखिमयुक्त तरिका भनेको माउरिसियोको सरकार व्यापक स्वतन्त्र व्यापारको क्षेत्रसँग जोडिनु हो । यो रूपान्तरण अर्जेन्टिनाका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।
ब्राजिल, मेक्सिको र अर्जेन्टिनालाई एउटै बाटोमा हिँडाउँदा नेतृत्वको विवाद पनि स्वतः समाधान हुन सक्छ । राजनीतिक कारणले गर्दा यस प्यासिफिक क्षेत्रमा अझ बढी उदारवादी अर्थतन्त्र ल्याउने र एटलान्टिक क्षेत्रमा संरक्षणवादी सत्तासहित यसो गर्ने चिलीको चाहना देखिन्छ ।
यस्तोमा यो स्वतन्त्र व्यापारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रशस्त कारण हुन सक्छ । जस्टिन ट्रयुड्युको प्रधानमन्त्रित्वको क्यानडालाई पनि यसका सहभागी गराउनु स्वागतयोग्य हुन सक्छ ।
हो, भेजेजुएलाका मादुरोले नवउदारवादी विवादको विरोध गर्न र अस्वीकार गर्न सक्छन् । तर, यस क्षेत्रमा उनको बलियो आधारलाई हेर्दा धेरै देशहरूले यो समूहमा सहभागी हुन उनलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन दिन सक्छन् । निकारागुआ, बोलिभिया र सम्भवतः इक्वेडरले यसमा भाँजो हाल्न सक्छन् तर यसलाई रोक्न सक्ने गरी तिनीहरूसँग राजनीतिक र आर्थिक हैसियत छैन ।
दक्षिणी गोलाद्र्धको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता विवादलाई कायम राखेर सुरु हुुनु हुँदैन । मेक्सिको, कोलम्बिया, चिली र पेरुलाई यसअघि नै संगठित गरेको प्यासिफिक एलाइन्स स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सुरु गर्न उपयोगी बिन्दु हुन सक्छ ।
यो सम्झौता वस्तु तथा सेवा, व्यापार सहजीकरण, उत्पत्तिको नियम र विवाद निरोपणमा केन्द्रित छ । कुनै पनि नयाँ सम्झौता, गैरभन्सार अवरोध र सरकारी खरिदका लागि ल्याटिन अमेरिकामा संरक्षणवादका लागि अदृश्य वा दृश्य उपकरणका दुई समूह प्रायः प्रयोग गरिन्छन् । यिनले साधारण स्तरलाई पालना गर्नैपर्छ । त्यस्तै श्रम र वातावरणीय अभ्यासका पक्षमा पनि ध्यान दिनैपर्छ ।
सधैं झगडाको निहुँ बन्ने गरेको लगानी तथा बौद्धिक सम्पत्ति मुद्दा हरेक वार्ताको विषय बन्नैपर्छ । तर, संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपस्थित भएको सन्दर्भमा उत्तरी अमेरिकी व्यवसायहरूले समर्थन गरेको विवादास्पद नियमहरूलाई समावेश गर्नु हुँदैन । त्यसैले, अन्ततः अमेरिकीहरूबीच स्वतन्त्र व्यापारको युगको आगमन भएको छ । यसका लागि ट्रम्पको राष्ट्रवादी र संरक्षणवादी क्रियाकलापलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
(आन्द्रेस भेलास्को चिलीका अर्थमन्त्री र कोलम्बिया विश्वविद्यालयको प्रोफेसनल प्राक्टिस इन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट विषयका प्राध्यापक हुन् ।)
अमेरिका स्वतन्त्र व्यापार डोनाल ट्रम्प